ड्युटी छाडेर निजी अस्पताल र मेडिकलमा काम गर्ने दुई डाक्टर निलम्बित ! – Yuwa Aawaj
चैत्र २, २०७७ सोमबार 613
Prevओली पक्षले भन्यो- सम्झौता होइन, माधव पक्षलाई कारबाही गरिन्छ ।
Nextक्रिकेटको कपि गर्दै नेपाल सुपर लिगका फ्रेन्चाइज टिम र मालिक सार्वजनिक !
मनछुने भनाईहरू – एउटा राम्रो मन लाखौ राम्रो अनुहार भन्दा राम्रो हुन्छ, रोज्नु छ भने मन हेरेर रोज्ने गर, अनुहार हेरेर होइन ।
एम्बुलेन्स दुर्घ’टना हुँदा एक जनाको मृ’त्यु, दुई घा’इते ।